Aktar Maraykan ah oo loo xiray bam been ah oo uu Booliiska ku wargaliyay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAktar Maraykan ah oo loo xiray bam been ah oo uu Booliiska ku wargaliyay
Hiiraan Xog, Apr 11, 2018:- TJ Miller oo ah Jilaa iyo shactiroole Maraykanka u dhashay ayaa lagu soo oogay in uu booliiska ku wargaliyay halis bam oo been ah isaga oo tareen ku safraya, arrintaasna uu si ula kac ah u sameeyay, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Miller ayaa lagu eedeeyay in uu Booliiska wacay kuna wargaliyay in haweenay tareenka la saran ay boorsadeeda ku wado bam, Isniintii ayaana isaga laftiisa lagu xiray magaalada New York.
Arrintan ayaa dhacday 18 Maarso, baaritaan ayaa lagu sameeyay tareenkii wax bam ahna laguma arkin.
Miller ayaa wajahaya ilaa shan sano oo xabsi ah haddii lagu helo dacwadaha uu wajahayo.
Jilaagan ayaa caan ku ah Erlich Bachman oo uu ku jilay shactirada taxanaha ah ee Silicon Valley, wuxuuna ka soo muuqda filimo ay shirkadda Hollywood jishay sida Deadpool iyo Cloverfield.
Sida ku qoran war uu soo saaray garsoore Maraykan ah oo ku sugan deegaanka Connecticut, ninkan 36 jirka ah ayaa lagu eedeeyay in uu markii hore booliiska u sheegay in haweenay “timo buni ah leh oo khamaar qabta ay wadato wax qarxa wadato ayna saaran tahay bas u kala socda Washington DC iyo New York City.
Markii ay booliis dib u waceenna wuxuu sheegay in ay timo guduudnayd, khamaar guduudanna wadatay oo ay boorso madaw wadatay.
Sida qoraalkaas aan soo sheegnay ku xusnayd wuxuu sheegay in gabadhu ay boorsada kolba furaysay iyada oon waxba kala soo baxaynin, ayna u muuqatay in ay tareenka gubi rabtay.
“Dadka tareenka saaran oo dhan baan u walbahaarsanahay, ee qof ha baaro haweenaydaas” ayaa laga soo xigtay in uu yiri.
Askarigii taleefanka kula hadlay ayaa hadalkiisa ka shakiyay wuxuuna waydiiyay in uu khamri cabay, wuxuuna ugu jawaabay hal galaas oo nooca wine la dhoho ah.
Tareenka ayaa markii dambe si fiican loo baaray wax qarxa iyo shay kale oo laga shakiyo toonana laguma arag.